नेपालमा अण्डरवर्ल्डको उदय, 'भर्टेक्स' प्रहरीका रोमियो ! शृङ्खला -१ - Dial 100 News
सोम, कार्तिक ३, २०७७
बाराबाट श्रोत नखुलेको १३ लाख बराबरको नगद बरामद !
किराना पसलबाट चोरी गरेको अभियोगमा दुई जना पक्राउ !
आफ्नै काकाको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ !
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाः ३ हजार ७९० जना संक्रमित थपिए, थप १८ जनाको मृत्यु !
आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा पर्वत राई पक्राउ !
दाङमा अमेरिकी डलर देखाएर ठगी गर्ने धादिङकी महिला सहित ३ जना पक्राउ !
ज्यान मार्ने उद्योगमा १७ वर्ष कैद सजाय भएका ‘मेचे’ ६ वर्षपछि गोंगबुबाट पक्राउ !
ललिता निवास प्रकरण : काँग्रेसका उपसभापति गच्छदारको सम्पत्ति रोक्का !
सांसदलाई दसैँ भत्ता, स्वास्थ्यकर्मीलाई सात महिनादेखिकाे जोखिम भत्ता खै ?
अब सरकारको काम मृतक र संक्रमित गन्ने मात्र !
नेपालमा अण्डरवर्ल्डको उदय, ‘भर्टेक्स’ प्रहरीका रोमियो ! शृङ्खला -१
in अपराध समाचार, फिचर समाचार, ब्रेकिङ्ग समाचार
काठमाडौँ।बिक्रम सम्बत् २०६० ताका नेपालमा ५० को दशकबाट सुरु भएको गुण्डागर्दीको प्रभाव राम्रै भएपनि अण्डरवर्ल्ड शैलीको अपराधिक समूह जन्मिसकेको थिएन। बिक्रम सम्बत् २०६० को आसपासबाट गुण्डागर्दी शुरु गरेका दिनेश अधिकारी ‘चरी’, कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ र समिरमान सिंह बस्नेत एउटै समुहमा रहेर अपराधिक दुनियामा आफ्नो नाम खोज्दै थिए। २०६२ सम्म आईपुग्दा घैंटे र चरीबीच द्वन्द बढ्न थालेपछि चरी सो समुहबाट अलग भएका थिए। समिरमान र घैंटे भने एउटै समुहमा रहेर गुण्डा नाइके चक्रेमिलनको लागि काम गर्दै थिए।
उता चरी धादिङ्गको खोला, गिट्टी,बालुवा, र ठेकापट्टाबाट हप्ता असुली गर्न थाले। त्यसताका चरीका सहयोगी थिए राधाकृष्ण भण्डारी ‘राधे’
। धादिङ्गमा राम्रै प्रभाव जमिसकेपछी चरी समुहले बालाजु र लैनचौर क्षेत्रलाई समेत आफ्नो एरिया बनायो। २०६९ सालमा राधे ‘चरी’ समुहबाट अलग भई केहि कांग्रेस निकट युवालाई लिएर आफ्नो छुटै समूह तयार पारे। त्यसपछि शुरु भयो राधे-चरी युद्ध। यता चरीले धादिङ्गबाट मासिक ५ करोड उठाउने गरेको छ भन्ने खबर घैंटे समुहमा पुगेको थियो। खबर गर्ने थिए हाल अपराध महाशाखाले डकैत केसमा पक्राउ परेका मातातीर्थका बिक्रम श्रेष्ठ।नाताले समिरमानको फुपूको छोरा पर्ने बिक्रम त्यतिबेला धादिङ्गमै क्रसर संचालन गर्दै आएका थिए। त्यसबेला उनि राधेका लागि काम गरिरहेका थिए। केही समय पछि राधे घैंटे समुहमा लागे।
एकातिर समिरमान-घैंटे लाई धादिङ्गमा आफ्नो प्रभाव छोड्नु थियो भने अर्का तिर चरीलाई राधे सँग बदला लिनु थियो। दुवै समूह उचित मौकाको खोजीमा थियो। २०६९ को अन्त्यतिर राधेको भाईमाथि चरी समुहले खुकुरी प्रहर गरी हात काटिदियो । सो घटनाबाट आक्रोशित बनेका राधेले चरीलाई मार्ने योजना बनाउन थाले। सोहि समुहमा रहेका समिरमान-घैंटेलाई धादिङ्गमा असुलीको मार्ग खोल्नु थियो। तिनजनाकै टार्गेट एक भएपछी चरी मार्ने योजना सुरु भयो। कामको जिम्मा पाए समिरमान बस्नेत सँग निकट रहेका अम्बर बहादुर रानाले। उनि त्यतिबेला नेपाली सेनामा कार्यरत सिपाही थिए।
धादिङ्गको एक कार्यक्रमबाट फर्कने क्रममा २०७० साल असार २१ गते शुक्रबार दिनेश अधिकारी ‘चरी’ माथि गोलि प्रहार भयो। राति साढे नौबजे बलम्भु सिप्रदी पुलमा चरी माथि गोलि प्रहार गर्ने व्यक्ति थिए ‘मगर’ भन्ने अम्बर बहादुर राना।जो निरन्तर समिरमानका बिश्वासपात्र रहिरहे। चरीमाथी आक्रमणको सुरक्षीत स्थानको खोजीमा रहेको घैंटे समुहले बिक्रम श्रेष्ठको एरियालाई रोजेको थियो।
मिति २०६९ /१२/२६ गतेबाट महानगरीय प्रहरी प्रभाग (हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त ) दरबारमार्गको कमाण्ड सम्हालेका थिए इन्स्पेक्टर (हाल डिएसपी) कुमुद ढुंगेलले। जो नाताले समिरमान सिंह बस्नेतका दाई पर्छन।
चरिमाथी गोलि प्रहार भएको तिन दिनपछि राधाकृष्ण भण्डारी ‘राधे’ ले कलंकीमा प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरे। त्यतिबेला प्रहरीको तिब्र खोजिमा र एन्काउण्टरकै सुचिमा रहेका राधेलाई समिरमानकै आग्रहमा सरेण्डर मार्फत जोगाइएको केहि प्रहरीका उच्च अधिकारी नै बताउँछन्। त्यसो त आफ्नो एरिया बाहिर गएर राधेलाई नियन्त्रणमा लिनुले पनि केहि गढबढ भन्ने पक्कै देखाँउछ। पछि राधेलाई महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका बुझाइयो।
कहानीमा रङ्ग त त्यतिबेला चड्यो जतिबेला चरीमाथि गोलि हान्दा प्रयोग गरिएको9mm को अमेरिकन पेस्तोल चरीकै हो भनेर राधेले बयान दिए। जुन पेस्तोल प्रहरीले फेला पार्न सकेको थिएन। पछि त्यहि हतियारको प्रयोग गरेर घटना भयो । पक्राउ परेको २८ दिनपछि राधे १ लाख धरौटीमा छुटे। राधेकै बयानको आधारमा २०७० साउन १३ गते दिनेश अधिकारी ‘चरी’ पक्राउ पर्ने र उनीपनि धरौटीमा छुटे।
२०७० पुष १५ गते ठेकेदार बिनोद श्रेष्ठको पार्टीबाट फर्किदै गर्दा ढुंगेधारामा राधेमाथि खुकुरी प्रहार भयो। समिरमान समुहका राधेमाथी खुकुरी प्रहार भएपछी प्रहरीले चरीलाई मोस्ट वान्टेड सुचिमा राख्यो। सो घटना पछि चरी फरार भए। कुमुद ढुंगेल परिसरमा ‘सादा पोशाक’मा काम गर्न थाले।
२०७१ साउन २१ मा महानगरीय प्रहरीको अपराध महाशाखाको प्रहरीको टोलीसँग काठमाडौं र धादिङको सीमामा पर्ने भीमढुंगामा दोहोरो फायरिङ हुँदा गुण्डानाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’को मृत्यु भएको थियो।
धादिङमा ठेक्कापट्टाबाट आपराधिक यात्रा सुरु गरेका गरेका चरीमाथि व्यापारीहरुबाट जबरजस्ती रकम असुली, ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप, गैंडाको खाग तस्करीलगायतमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो ।
एकातिर दिनेश अधिकारी चरीको साम्राज्य ढलेको थियो भने अर्कोतिर समिरमानहरु झन् बलिया हुँदै गएका थिए।
सो घटनामा चरीको सबै सूचना परिषर काठमाडौँमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकारी मार्फत अपराध महाशाखा पुगेको थियो।